Culeysyada sharci ee qabsan doona Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka marka uu xilkaas qabto – Kalfadhi
Xeerka Hanti-Dhawraha Qaranka waxa uu Golaha Shacabku meel marin doonaa Sabtida, sida uu sheegay Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad. Inkasta, oo uu Xeerku awood siinayo Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka, waxa uu haddana majaraha ka xiraya markuu xilka ka dego kadib, sida ay qorayaan qodobada ku jira qaar.
Tusaal, waxaa uu Hanti-Dhawruhu xilkaas hayn karaa 10 sano ugu badnaan, wanaa marka xilka loo cusbooniisiiyo. Xili Madaxeedkiisa caadiga ah waa 5 sano, balse 10-ka sano waxa uu gaari karaa marka uu fursad u helo in xilka markale loo magacaabo.
Inta uu xilka hayo waxaa sanad kasta baaraya Hanti-Dhawre uu soo magacaabi doono Baarlamaanka Soomaaliya, taas oo ka dhigan in Hanti-Dhawraha Qaranka qudhiisa la hubinayo inuu si sharciya u gudanayo waajibkiisa, si uusan ugu milmin xafiisyada kale ee dowladda.
Sida ku qoran Hindisaha Xeerka Hanti-Dhawrka, marka uu xilka Hanti-Dhawraha ka dego, ma qaban karo xil siyaasadeed, mana ku biiri karo xisbi siyaasadeed, waana culeyska ugu weyn ee uu Xeerkani saarayo Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka.
Intaas waxaa dheer inuu Hanti-Dhawruhu iska-casili karo xilka iyadoon la qasbeyn, isagoo u gudbinaya Madaxweynaha JFS. Iney maxkamadi xukunto ama uu dhinto ayuu, sidoo kale, xilka ku weyn karaa. Laakiin, Kalfadhi ma ogaan wali iney Hindisaha ku jirto inuu, si la mid ah markuu waqtiga xilka dhameysto, u weynaayo xuriyaddiisa gelidda siyaasadda, marka uu xilka ka tago isagoon dhameysan waqtigiisa.